Semalt: Gumi Tricks Kuti Uvandudze Zviripo paIndaneti
Imwe yenzira dzekuita kuti bhizimisi ribudirire nderekuvapo kweIndaneti kubva pane zvinopfuura 85% zvekutsvaga zvigadzirwa nemasevisi zvinoitika paIndaneti. Ivan Konovalov, the Semalt Mutapiriri Akabudirira Mutengi, anokupa tsvakurudzo inotevera yekuvepo kwekubudirira paIndaneti.
1 - cheap windows vps 5. Personas
Kutanga, inzwisise chinangwa chinowanikwa pamushandirapamwe wako. Zvinoreva kuti unofanirwa kuisa unhu hwevanhu kune digital marketing tsanangudzo kana chinangwa. Ichinobatsira kuisa maitiro akasiyana-siyana achishandisa zvifananidzi zvakafanana sevanokurudzira, marwadzo ekurwa, anoda, hupenyu, zvinangwa, kana tsika. Vanosika zvishoma pamitambo yemakakiti, nokudaro kutengeserana kwemajeri kunonyanya kuve nyore, kunodhura, uye kunowedzera.
2. Mutengesi Rwendo Mapikicha.
Mapurisa ekufambisa kwevatengi anoshandiswa nevatengesi kuti vabatsire kunzwisisa kambani kubva kune zvinoonekwa nevatengi uye kushamwaridzana kwavanoita nekambani. Nekutaura kwakadaro, zviri nyore kuziva kuti zvinodikanwa nevatengi ndezvipi panguva yekukurukurirana kwega, nzira yekuvandudza nayo, uye kana pane chidikanwi chekuvandudza kushandiswa kwebasa.
Zvakakosha kuti zvese zvewebhu yepaIndaneti zvive zvakabatana zvikuru uye zvakapiwa nenzira yakakodzera yekukwezva vatengi. Vatengesi havafaniri kuzivisa vashandi nezvekutenga zvigadzirwa zvavasingazivi. Kutanga, vape zvimwe ruzivo pamusoro pezvigadzirwa zvako kana mazano uye shandisa kalendari kuti ugovere zvinyorwa nguva dzose.
4. Chigadziro Chinyorwa
Vatengi vanoda kufara, uye ndicho chikonzero nei vachizoshanyira nzvimbo yako. Kana zviri izvo zvakafanana nguva dzose pavanoshanyira, vanozovhunduka zvekushanyira izvo zvinoguma nekuderera kwemugwagwa izvo zvisiri chinhu chakanaka. Zvinyorwa zvinogadzirisa zvinotarisirwa pane zvinodiwa uye zvaunofarira zvezvinangwa zvevateereri vako. Kunyange zvakadaro, kwemwedzi mitanhatu kusvika kumwedzi gumi nembiri, ita nechokwadi chekuvandudza webhupu yewebhu kuti ive nechokwadi chokuti inoenderera mberi nezvinoitika.
User ruzivo runonyanya kufunga nezvekuti vanhu vanobatana sei nechigadzirwa chemagetsi.Munhu webhizimisi anogona kunge ane nzvimbo yakaita zvakanaka asi asingazivi kuti ingashandise sei. Kubhadhara.Kutanga kwezvose, kusika unhu hukuru hwemushandisi kunoda kunzwisisa vateereri.Italytics inogona kupa ruzivo pamusoro pemapeji akavakidzwe, uye kuti vashandi vanofamba sei kuburikidza newebsite.
Zvakakosha zvikuru kuti bhizinesi yacho yakarongedzwa zvakanaka ne kutsvaga injini s sezvo vanopfuura 80% vevatengesi vemazuva ano vanoshandisa injini yekutsvaga kuwana zvigadzirwa zvavo. SEO (Tsvaga Engine Optimization) inobatsira kutungamirira vatengi kune bhizimisi pakati pevamwe vari mumhizha. Mumwe angashandisa nzira yekubhadhara-per-click (PPC), asi hutsva hwekutsvaga hunoguma kubva pa SEO huri 8.5 dzimwe nguva dzinoshanda.
Kubatanidza hupenyu hwehutengi nekutengeserana kwema digital kunogona kuva nezvikomborero zvakadai sekuzivikanwa kwekodhi, kuvimbika, kutendeuka kwehuwandu, nekuvandudzika kune unyanzvi hwevatengi. Zvisinei, usangogadzira chero kero yekare. Iva nechokwadi chokuti zvinyorwa izvi zvishomanana kuita kuti zviwedzere kugovana, uye vane mazwi ekuwedzera kuonekwa kwavo. Ita shanduro yepamusoro-soro mifananidzo kuti uratidze marati uye nguva dzose uedze vatsva kuti uone kuti ndeapi ayo vatengi vanoita nevakawanda. Zviripo zvinowanikwa pane infographics uye mavhidhiyo zvakare zvakare kudzidzisa uye zviri nyore kunzwisisa. Kunyanya, zvinogutsa zvakanakisisa zvekugovana.
8. Kurukura nevateereri
Vanhu vazhinji vanotendeukira kumagariro evanhu vanoshanda. Zvizhinji zvezvinoda izvi uye mibvunzo zvinoguma zvisingateereri. Ita pfungwa yekupindura vatengi vataura uye mhinduro uye uvazivise kuti iwe uri kuteerera. Nekudaro, vamwe vachada kugovana zvavanosangana nazvo nechigadzirwa kana masangano anopiwa. Nguva dzose ngavonge vanhu vose vanogovera zvinyorwa panzvimbo iyi kana avo vanotaura pamusana kuti varambe vachikurukura.
9. Kutengeswa Kwemagariro evanhu
Kubudirira kwehuwandu hwemagariro evanhu kunofanira kuva nechinangwa, kushandiswa kwemashoko ehutano hwemagariro ebhea-kuongororwa mabhizimisi ehurumende akabhadhara, iva nechokwadi chekushandura zviziviso zvemazuva matatu kusvika kune mashanu, uye unovimbisa kuti iyo inofambisa-shandiswa.
Inopfuura 65% yezvose zvinoshandiswa nehuwandu hwemamiriyoni zvinoitika pane zvigadzirwa zvemagetsi. Saka naizvozvo zvakakosha kutora iyi misika kuti kuwedzere kukoshesa kunzvimbo. Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yako ine chimiro chakanaka chiri chakanaka chero chekuona chisarudzo.